Nkpuru ahihia ndi China, akwukwo ahihia, akwukwo ahihia - Drotrong
Mkpụrụ osisi ndị China
20 Nde+ 20 square kilomita akuku isi
25 + 25 + ahụmahụ ụlọ ọrụ
8000+ 80,000 ㎡ ụlọ ọrụ
2000 + 20,000 tọn Kwa Afọ mmepụta
Kemgbe 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. etinyewo aka na ịmepụta otu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke ahịhịa ndị China, nke gụnyere mkpụrụ osisi Chinese, ịkọ ihe, nhazi mbụ, nhazi miri emi, ịmịpụta akwụkwọ na ịzụ ahịa.
Na mmepe nke ụlọ ọrụ anyị, anyị eguzobewo isi osisi na mmepụta isi nke Chinese herbs. Maka ntọala osisi, anyị nwere Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus na ihe ndị ọzọ, nke kpuchie ihe karịrị nde 20 nde. Maka mmepụta isi, anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe abụọ na otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke na-ekpuchi ihe karịrị 60,000 square mita. Anyị na-eme atụmatụ iwu ụlọ ọrụ ntanetị ọhụrụ na ụlọ ọrụ nlekọta ahụike n'ime afọ atọ.
Akuku isi & Factory
20 Nde Square Mita Akuku Base & 80,000 ㎡ ụlọ ọrụ
Mmeputa ihe omumu
Mkpụrụ osisi ndị China ọzọ >>
Mkpụrụ osisi ọzọ >>
Osisi Tea ọzọ >>
Ngwaahịa ahụike ọzọ >>
N'oge a, ndị mmadụ na-elebara ahụ ike ha anya, ya mere, ọtụtụ ndị na-ahụ maka nlekọta ahụike na-amasị ndị mmadụ.Drotrong na-enye mkpụrụ osisi kachasị mma ma wepụ dị ka akụrụngwa maka ngwaahịa nlekọta ahụike. Akụrụngwa anyị dị mma, nke nwere oke ọnụ ahịa.
Lọ ọgwụ na Druglọ ahịa ọgwụ
Ọgwụ ọdịnala ndị China (TCM) bụ ụdị ọgwụgwọ nke bidoro ọtụtụ puku afọ gara aga na China. A na-akpọkarị "TCM," ndị ọkachamara na-eji mkpịsị osisi egbochi ma ọ bụ na-agwọ nsogbu ahụike. A na-ejikarị ahịhịa ọgwụ Drotrong na ụlọ ọgwụ na ụlọ ahịa ọgwụ, 100% okike na-enweghị mmetọ, nke kachasị mma maka ahịa gị na ọnụahịa ụlọ ọrụ.
Ngwurugwu-ndi na-eri nri
Iji ogwu nri mmako na-enweta mkpa na mmepụta anụmanụ n'ihi mmachibido iwu iji ụfọdụ ọgwụ nje, mmebi ahụ na-emerụ ahụ yana nrụpụta ego. Drotrong nwere ọtụtụ ahịhịa na wepụ nke enwere ike iji mee ihe maka mgbakwunye akwụkwọ nri.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-anabata ahịhịa ndị China ma ọ bụ nke ahịhịa dị ka ihe eji arụ ha. Drotrong nwere ntọala osisi, ụlọ ọrụ nhazi ahịhịa na ụlọ ọrụ mgbakwunye ahịhịa. Site na mkpuru ahihia na mkpuru ahihia, anyi nwere ike inye gi oru OEM nke puru ichebe oge na ego gi.
Ugbu a, ahịa mara mma jupụtara na herbal ntecha. Ndị mmadụ na-ahọrọ ihe ịchọ mma nke ahịhịa n'ihi na ha enweghị nchekwa, ọ dị mma maka ụdị anụ ahụ niile yana enweghịkwa mmetụta dị n'akụkụ. Enwere ike iji ọgwụ ahịhịa ahịhịa ahịhịa ahịhịa dị na China na ụlọ ọrụ ịchọ mma.
Ihe nlere n'efu maka gị
Nwere ike ịlele anyị mma site n'omume
Pịa iji nweta ihe atụ
Herbal granule omumuihe malitere ikpe pro ...
Workshoplọ ọrụ ahịhịa nke ahịhịa nke ụlọ ọrụ anyị malitere imepụta nnwale, nke pụtara na Astragalus, forsythia, bupleurum na ezigbo ọgwụ ndị ọzọ ga-arụ ọrụ n'ime akwụkwọ mkpịsị akwụkwọ na mkpụrụ ndụ dị iche iche na usoro mmepụta nke anyị n'ọdịnihu, ma ga-aga ...
Maca bụ nwa amaala ugwu Andes nke South America nwere elu nke 3500-4500 mita. A na-ekesa ya na mpaghara ebe obibi Puno na etiti Peru na obodo Puno na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Peru. Ọ bụ osisi nke genus Lepidium meyenii na Cruciferae. Ugbu a, nnukwu ...
Mmiri ara ehi ogwu
Mmiri ara ehi thistle mmanụ bụ ụdị nri na-eri mmanụ mmanụ nke mmanụ a thụ nke mmiri ara ehi thistle. Ọ nwere nnukwu ekwukwa n'akwụkwọ uru. Isi mgwa nke mmiri ara ehi thistle bụ unsaturated ọdụdụ acid, nke dị mkpa ọdụdụ acid, ntụgharị linoleic acid (Ọdịnaya 45%). Mmiri ara ...
Okwu: NO.88 South Garden Road, Gaoxin District, Chengdu, China
Ekwentị: +86 13908068569
Debanye aha iji nweta ozi na akụkọ kachasị ọhụrụ (nkwalite, ngwaahịa ọhụrụ wdg.)
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya.